Njengoba sazi, uphawu ngalunye Zodiac has izintelezi ayo, ngenxa okuyinto kukhona ithuba lokuqinisa ukholo ngamandla abo, ukuze kufezeke izinhloso kanye ugweme izinkinga ezihlukahlukene. Labo kungaba amatshe ayigugu noma ephuma kabili eziyigugu. Gemini - abameleli acacile kakhulu futhi eziqanjiwe timphawu emoyeni - Ubuye amagugu ayo, talismans, okuzoxoxwa ngayo kulesi sihloko.
Active futhi enza izinto ezihlukahlukene Gemini ababhula ngezinkanyezi belulekwa ukusebenzisa njengetshe ezivikelayo njenge-agatha. Lokhu mascot ukuvimbela nesenzakalo kwezifo ezihlukahlukene. Futhi zivikela neso elibi, lokhu Zodiac itshe ngemvume Gemini futhi isikhathi eside ekuphileni womnikazi wayo. Ngaphezu kwalokho, uyakwazi ukunikeza abantu isipho bokukhuluma, okuyinto ebaluleke ikakhulukazi bale uphawu, ngoba iningi labo uyaphupha ukuzibonakalisa njengoba narrators abanamakhono noma izipikha. Ngoba kubalulekile kangaka njalo abaziphethe itshe. Gemini bathanda ukuthenga ongaphakeme-key cute ubucwebe agathe:, namacici, imihlobiso elengayo.
rose asebenza ngebhethri
Twins ngubani dream of Uthando olukhona ebandleni futhi ukuphila komkhaya kujabulise, kufanele njalo zigqoke ubucwebe ezenziwe ka rose asebenza ngebhethri. Lokhu kubaluleke kakhulu uma uphawu Gemini - owesifazane. Leli tshe - amaminerali esobala - kusiza amantombazane abangakatjhadi bahlangane othandekayo futhi ashade naye. Ushadile ladies Mascot ne asebenza ngebhethri pink isiza ukugcina ukuthula emndenini nokuzwana. Ngaphezu kwalokho, usizo olukhulu ukuthuthukisa ikhono lokuqonda abanye abantu futhi ukuqinisa amasosha omzimba itshe. Gemini futhi ophethe rose asebenza ngebhethri, balahle ukucindezeleka, ngaleyo ndlela avalele unomphela abantu ezimpilweni zabo.
Enye mascot, okuyinto Kunconywa ukusebenzisa Gemini - kuyinto UBeryl. Izinhlobonhlobo ibherule ayigugu zihlanganisa ezifana Emerald, aquamarine futhi heliodor. Ziyakwazi iziphandla kakhulu ngenkathi kuhanjwa, kusenza sikwazi ukusukumela phezulu ukuthuthukisa ubugagu, uphe umuntu ogqoka kubo, amandla, umsebenzi ngokomzimba futhi ukulinganisela kwengqondo. Ngaphezu kwalokho, esesikhombisa yikrisolithe, esesishiyagalombili ukwazi ukuze akhulule ukukhathala, isimo ukucindezeleka, imizwelo edikibalisayo futhi ugcwalise Gemini energy oqondile.
Ukuhlukanisa phakathi amatshe ayigugu kanye semiprecious yilezi Izimpawu zezinkanyezi, Gemini kufanele sikhumbule yikrisoprasi. Kuyokusiza abamele lokhu Umlaza lwezinkanyezi impumelelo kukho konke emizamweni yakho. Lokhu mascot uphelele ukuze Twins, njengoba leli tshe kuletha inhlanhla kulabo zihlukile ukucabanga ezintsha futhi njalo ukulwela ukuba uthuthukise ukuphila kwakho. Yikrisoprasi bakwazi ukuvikela kusuka sglaza, spoilage futhi eziyingozi okuhlukahlukene, kanye abanyundeli nomona. Ubucwebe nale amatshe kufanele igqoke njengoba njengentelezi, kuleli cala, bayoba ukuvikela umnikazi walo kusuka amandla omubi.
Charoite is kahle afanele ukuze Twins, njengoba ngokuvamile basuke bakhangwa izinkondlo noma ifilosofi. Kutfutfukisa umcabango yokudala, ivusa umuzwa futhi usiza ukuheha abantu abanazo. Leli tshe libuye Kunconywa ukugqoka uma kukhona izinkinga zempilo ezihlobene umsebenzi izinso, isibindi.
Yikuphi uphawu zezinkanyezi ngoJanuwari: izici, ezempilo, ithonya amaplanethi
Agasti 20 - Zodiac ngemvume Leo. Izici kanye Oluvumelana
Izimpawu Libra abesifazane: iqiniso
Yesenia: igama value, indima isiphetho egameni
Amawele - abangekho ubuntu ehambisanayo okungavamile esivelele zalesi sibonakaliso?
Uju Dark: izakhiwo nezinhlobonhlobo. Indlela ukuqoqa uju amnyama
Itiye Green ne-jasmine
Incazelo of Life
ISidlo njengengxenye yokukhuluma
Izikhulumi ze-multimedia 2.0: ukubuyekezwa, incazelo, imininingwane, amamodeli nokubuyekeza
Kitten Newborn: imithetho eyisisekelo ukunakekelwa